Bike Racer 4.3 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 4.3 လြန္ခဲ့ေသာ 1 လက
ဂိမ္းမ်ား ၿပိဳင္ပြဲ Bike Racer
Bike Racer ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
ဆိုင်ကယ်ပြိုင်ကားသမားသင်သည်လူမျိုးလောကီသားတို့သည်အဆောင်တတ်၏နှင့်အစွန်းရောက်မော်တော်ဆိုင်ကယ်မြင်းစီးသူရဲဖြစ်လိမ့်မည်။ ထိပ်ပေါ်မှာဖြစ်တတ်နိုင်သမျှအတိုဆုံးကာလ၌သူ finish ကိုလိုင်းရောက်ရှိဖို့ရန်အတွက်အတားအဆီးမှတဆင့် Swerve ။ လက်တွေ့လှုပ်ရှားမှုတွေနှင့် 3D သက်ရောက်မှုနှင့်အတူသဲကန္တာရဆောင်ပုဒ် Explore ။ သင့်ရဲ့စက်ဘီးကိုချွတ်ကျသွားမရှိဘဲအများဆုံးမြန်နှုန်းရောက်ရှိရန်ထိပ်ဂီယာကယူပါ။
အံ့သြဖွယ်သဲကန္တာရလမ်းများ, လမ်းပိတ်ထားတောင်နှင့်မြို့လမ်းများပေါ်တွင် curvy လမ်းကြောင်းအားဖြင့်သင်တို့၏စက်ဘီးစီးပေမယ့်ဆိုင်ကယ်ပြိုင်ကားသမားအတွက်အန္တရာယ်အလှည့အပေါ်သတိပြုရကြမည်။ လာပြီးနှင့်ခုန်နှင့်ပြည့်စုံအကြီးအကျယ်အားကစားကွင်း, မှတစ်ဆင့်တစ်ဦးဖုန်မော်တော်ဆိုင်ကယ်မောင်းနှင်၏စိတ်လှုပ်ရှားမှုနှင့်စိတ်လှုပ်ရှားခံစားရသည်။ သငျသညျကိုအကောင်းဆုံး moto အော်တို champio ဖြစ်ကြောင်းသက်သေပြခြင်းနှင့်ဦးဆောင်၏အပေါ်ဆုံးမှတက်။
အဆိုပါစိန်ခေါ်မှုအပွေးပွိုငျလမျးအတွေ့အကြုံနှင့်ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ရာဂရပ်ဖစ်နှင့်အတူ, သင်သည်သင်၏ဖုန်းကိုချနိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။ အခုတော့ adrenaline အဘို့အဆင်သင့်မရအပွေးပွိုငျလမျးအရေးယူလောင်စာနှင့်လူအပေါင်းတို့၏အလျင်မြန်ဆုံးလမ်းသွားအတွက်အောင်ပွဲရန်သင့်လမ်းစီး! သင်ကအကောင်းဆုံးဖြစ်နှင့်သင့်မော်တော်ဆိုင်ကယ်ပြိုင်ကားသမားပေါ်သင်တန်း daredevils ဤသည်၌ရှိသမျှသောမစ်ရှင်ဖြည့်စွက်နိုင်ပါသလား? ထိုအခါယခုစက်ဘီးစီးတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများနှင့်အတူတစ်ဦးစီးနင်းယူပါ!
- Play မှအခမဲ့!
- Amazing ပြိုင်ပွဲယာဉ်များတန်ချိန်
- Amazing 3D ပတ်ဝန်းကျင်သဲကန္တာရ themes များနှင့်အတူ
- သင့်ရဲ့ Facebook သူငယ်ချင်းများကိုစိန်ခေါ်မယ်
Bike Racer အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Bike Racer အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
Bike Racer အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
Bike Racer အား အခ်က္ျပပါ
vivo-api စတိုး 8.02k 7.35M
Bike Racer ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း Bike Racer အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 4.3
ထုတ်လုပ်သူ Million games
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ https://privacypg.s3.amazonaws.com/ppmilliongames.html
လက်မှတ် SHA1: 84:2A:8B:14:B4:CC:84:3E:75:CF:BE:2C:34:56:82:25:28:F1:93:4B
အဖွဲ့အစည်း (O): Million Games
Bike Racer APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ